Dayactirka ka soo boodbood | Laga soo bilaabo Linux
Anti | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, Qaybinta, GNU / Linux
Sida ku xusan xisaabaadkeyga, waxaan isticmaali jiray GNU / Linux muddo ku dhow 2 sano. Waa waqti aan la dayacin karin marka la barbardhigo jiritaanka kernel, ama qaybinta qadiimiga ah; oo dabcan laba sano khabiir igama dhigin. Laakiin haddii ay iga dhigeen a hopper distro waana inaan aqbalaa in badan oo aqoontayda ku saabsan nidaamka ay ka timaaddo waagaas. Laakiin mustaqbalka fog wax fiican ma ahayn.
Uma maleynayo inay tahay inaan sharaxo waxa uu yahay boodbood distro marxaladdan. Ka bood qaybinta una qaybi qaybinta adigoo raadinaya wax aadan waligaa helin. Waxa aan hoosta ku idhi waa kaliya khibradeyda shaqsiyadeed waana inaysan sinaba u dhigmin tan isticmaaleyaasha kale.
1 Cibaadada marinka
2 Halaag iyo nacasnimo
3 Waxyaabaha kugu kaca qiime ha kaa dhigin
4 Ma jiraan wax wanaagsan oo ku jira
5 Ma raacayo moodooyinka
6 Talooyin iyo gabagabo
Sanado ka hor waxaan la kulmay degel sharraxaysa waxtarka barnaamijyada bilaashka ah waxaanan kugu casuumay inaad u beddesho qaybinta Linux sida ugu dhakhsaha badan. Ilaa maanta waxaan ixtiraam weyn u hayaa boggaas maanta waa laga tegey oo is-xakamayn ayaa ka maqan. Markaa waan soo dejiyey, sida aan u malaynayo in inteena badani ku bilaabatay xilligan, Ubuntu; qaabkeeda 8.10 Cabsi Ibex. Waqtigaas kan sameeya qaxwaha aan qadariyo wuxuu ku orday 256MB oo RAM ah, sidaa darteed waan awoodi waayey inaan tijaabiyo.
Laakiin maan quusan. Maalin kasta waxaan arki lahaa shaashado ka mid ah desktops-yada ugu qurxoon ee aan heli karo, ka akhriyi karo qaabka, oo aan baran karo sida loo gubo sawirrada ISO. Sidaan xasuusto, waxay qaadatay maalmo in lasoo dejiyo sawirka. Ma ahayn illaa markii uu kumbuyuutarkaygu hagaajinayay xasuusta aan awoodi kari lahaa inaan tijaabiyo, laakiin waqtigaas ka hor waxaan horey ugu beddelay diskigeyga midka hadda socda (9.04) macallin, ganacsi-ka-faa'iideysan ayaa aniga iga badan.
Waxaan bilaabay inaan Ubuntu si isdaba joog ah u isticmaalo, badanaa sababta oo ah sida loola yaabay nidaamka ayaa iga tagay. Halkaasna tacaburradu way ka bilaabmeen. Markii aan rakibay qaybintaydii ugu horreysay, Fedora 14 Laughlin, waxyaabo taxane ah oo yaab leh ayaa bilaabay taas oo igu kaliftay inaan beddelo qaybinta.
Laga soo bilaabo rakibooyin kala duwan oo Fedora ah, waxaan u wareegay Ubuntu, Xubuntu, OpenSUSE, Debian, LinuxMint, Crunchbang, Trisquel, Mageia, ArchLinux, Archbang iyo kuwa kale oo magacyadooda lagu waayey meelaha xusuustu ka maqantahay; iyo deegaano badan oo desktop ah iyo maamulayaasha daaqadaha.
Aakhirkii waan ku daalay tan. Waxaan garowsaday in tani aysan aniga wax faa'iido ah ii ahayn xitaa bulshada oo i siisay fursado badan oo aan isku dayo. Maxaa dhacay?
Halaag iyo nacasnimo
Si looga takhaluso isku-buufinta waxa ugu horreeya ee ay ahayd inaan sameeyo ayaa ka fekeraya sababta aan u bilaabay. Fedora wuxuu ahaa mid madadaalo leh, laakiin marar badan waxay ii soo diri laheyd qalad aan la fahmi karin waana hubaal in dadka kale ay ku dhameysan lahaayeen inay dib ugu laadaan Windows, ama wixii ay isticmaali doonaan. Xitaa maanta wax fikrad ah kama haysto waxa dhacay ama sababta shaashadda telefishanka waxay igu haysay qayb kasta oo aan ciyaaro. Waxaan weydiiyay oo aan naftayda ku wargaliyay intii karaankayga ah, laakiin markaa xalka kaliya ee iila muuqday aniga oo aqoontayda kooban ay tahay inaan u baxsado qayb kale.
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa la yimid Crunchbang qaladkiina wuxuu ku dhawaaday inuu si sixir ah u dhammaaday. Wixii intaa ka dambeeyayna ma ahayn inay ka haajirto qaybinta qaladka darteed, laakiin waxay ahayd inaan isku dayo wax walba oo aan soo gudbayay. Ma jirin daaweyn dambe.
Waxyaabaha kugu kaca qiime ha kaa dhigin
Mid ka mid ah darawalada ugu waaweyn ee ka-faa'iideysiga haraaga ayaa ah la'aanta kharashka wax qeybinta. Kahor intaanan la igu garaacin weydiisashada qaybinta qaaliga ah, waa inaan dhahaa waxaan jeclahay inaadan lacag ka bixin nidaamka sidan oo kale ah. Waa riyada qof kasta oo macaamil ah: tayada aan laga doodi karin iyo qiimo aad u buunbuunin badan.
Laakiin inta badan qaybinta waxay rabaan inay kaa dhigaan mid aad kuugu fudud. Hababka ku nool, qaybinta ka baxsan-sanduuqa iyo waxyaabo kale oo sahlaya in loo guuro inta u dhexeysa qaybinta caanka ah saacado yar gudahood. Shaqsigeyga ugu fiican ayaa ah inaan ka wareego OpenSUSE oo aan lasocdo Gnome una wareego Fedora 3 daqiiqo kadib ku dhawaad ​​saacad rakibisteeda. Khaladka fátidic ayaa i haysay.
Marka qofku si guul leh u rakibo ArchLinux markii ugu horeysay, arrimuhu way isbadalaan. Markasta oo uu isku dayo, si xun buu u fashilmay. Muddo dheer kadib ayay ahayd inaan awoodo inaan deegaankeygii ugu horreeyay ee buuxa ku dhajiyo kan sameeya kafeega, khaladkuna wuu ka fogaa muujinta. Dhamaan cayayaankaas oo dhan waxay ii suurta geliyeen qalabkeygii ugu dambeeyay ee Arch ee rakibnaa inuu si buuxda u shaqeeyo wax ka yar 24 saacadood, marka rikoorkeyga cusub waa uu ka fog yahay toddobaadyadii miiska la garaacayay.
Markii aan isku beddelay Archbang-kii ugu horreeyay ee dhismuhu adag yahay, ma caawin kari waayay laakiin waxaan dareemay inaanay u qalmin in saacado badan lumiyo arrintaas. Haddii arrimuhu kugu kacaan, xitaa astaamo ahaan; waxaad dareemeysaa ku sii xirnaan iyaga.
Qiimeynta saacadaheyga shaqada si aan uga tago Debian mashiinkeyga kafeega iyo ArchLinux ee ku shaqeynaya laptop-kayga ayaa ah tillaabada ugu horreysa ee aan wax laga beddelin qaybinta mar dambe.
Ma jiraan wax wanaagsan oo ku jira
Isticmaalka qeybinta waqti aad u yar waxba nagama tegeyso. Waxaan isticmaalay Mageia maalmo yar mana dhihi karo wax intaa ka badan oo aan ka jeclaa xarunta qaabeynta. Ma aqaan waxa loo yaqaan? Maya. Ma ogeyd sida loo isticmaalo nidaamka xirmadaada? Midkoodna. Wax ma bartay? Laga yaabee, laakiin ma ahayn wax uusan horey u ogeyn.
Aqoontaasi cidna ma caawinayso. Waad joojineysaa adeegsiga qeybinta oo waad iska iloowday, mana caawin kartid cidda u baahan. Wadarta khasaaraha.
Sidoo kale, waxaan waqti ku qaadnaa inaan uga tagno waxyaabaha sidii ay ahaayeen. Anigu waxaan ahay isticmaale Vim ah, xoogaa kadibna faylka ~ / .vimrc wuxuu noqdaa mid aan laga maarmin oo qiimo leh. Luminta waxay ahayd wax aan fiicnayn oo si joogto ah loo saaro USB ama respándando Dropbox ma fiicnayn. Hada ku dhufo dhamaan barnaamijyada aad isticmaali karto, iyo inbadan oo khadadkoodii lumay maxaa yeelay ma lihid feyl sidan oo kale ah.
Waan awooday inaan ka tago qolka / guriga anigoo nool oo sifiican u nool, laakiin marwalba waxaan layaabay inay layaab tahay inaan ka tago faylalkii hore ee kaydinta oo aan tirtiro kadib uma muuqato inay wax xallin doonaan. Laakiin iyada oo aan loo eegin tan, rakibidda xirmooyinka aan u baahanahay waxay ka dhigan tahay waqti lumis. Waqtigu soo noqon maayo.
Ma raacayo moodooyinka
Ka gudub caqli kasta qiiq, Inaan la raacin qaybintii ugu dambaysay ee wanaagsan ayaa wanaagsan. Waxaad dammaanad ka qaadaysaa naftaada aragti aan eex lahayn haddii aad isku daydo, waqti kuma luminaysid haddii ay wax khaldamaan, iyo faa'iidooyinka kale, sida nooc ka mid ah daacadnimada midabkaaga iyo dhadhankaaga penguin. Sida shakhsiga ah sida ay umuuqato.
Xilligan ugu dambeeya waxaan ka beddelay Chakra una beddelay Aptosid, ka dibna SolusOS, ka dibna waxaan u beddelay Cinnarch. Maaddaama aysan shaqeynin, waxaan u wareegay Crunchbang Testing, taas oo haddii aan aqbalo kaarkayga fiidiyowga ee qaaliga ah. Laakiin waxaan u wareegay ArchLinux. Sababtoo ah mar dambe ma aanan dooneynin inaan beddelo, maxaa yeelay hadda ma ahan Dhibco moodada ama AUR. Waxaan ku doodi karaa kun iyo kow sababood, laakiin waxaan go'aansaday inaan ku dhego tan.
Xusuusnow in qaabka Live iyo hufnaanta waa saaxiibbadeen.
Talooyin iyo gabagabo
Waxaan u arkaa in aan ka boodayo distro ilaa distro caado xun. Waxaa jiri doona kuwo aniga iyo wax walba iga hor imanaya, laakiin anigu waan aaminsanahay. Sikastaba, waxaan kuu hayaa talooyin jumps noqo mid kafiican:
Xaqiiji in qaybinta ay daboolayso baahiyahaaga, ama halkii; hayso xirmooyinka aad u baahan tahay. Waxaa jira qeybinta aad u cusub - oo soo jiidasho leh - in maya.
Ha ku degdegin inaad rakibto. Tijaabi qalabkaaga marka hore. Dhibaatooyin ayaan kala kulmay kaarka muuqaalka, internet-ka wireless-ka ah iyo dhawaqa. Isaga oo aan hubin oo aan garanayn sida loo saxo waa khaladaad dhimasho ah
Samee baaritaano waqti dheer ah Waxaan tijaabiyey Chakra 15 maalmood si aan u arko inta ay ku hayn karto KDE. Waxaan helay aragti wanaagsan, waxaanan hayaa shuruudo aad u fiican oo la sameeyay oo aan uga fikiro.
Kahor intaanan libiqsan, badduna wey weyn tahay kalluunka oo dhan. Qeybintaas saxda ah waa inay jirtaa, laakiin waan ka fog ahay inaan helo. Aniguna kuma degdegin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Dhaqancelinta ka soo boodka fooxa
Waa hagaag, waa inaan qirnaa in badan oo naga mid ah dhibaatadan soo food saartay markii aan cusbayn, waa wax isbeddelaya waqti ka dib waana wax iska caadi ah inay dhacdo iyo sidoo kale inaan joojinno isku dayga iyo tijaabinta in kasta oo ay jiraan waxyaabo ka reeban.
Waxaa jira dad isku dayaya hal inuu la joogo weligiis. Dhibaatadu maahan tijaabo, laakiin taa waxay noqoneysaa dhibaato. Xitaa ma xasuusto inta Fedora saxan ee aan haysto.
Waxaa jira dad isku dayaya hal inuu la joogo weligiis <- waxay igu dhacday aniga oo leh Slackware 😛
Saaxiibkiis maqaal wanaagsan. Waxay ku jirtaa qodobo badan oo run ah. Kahor intaanan ugu dambeyn sii joogin ArchLinux, waxaan soo maray dhamaan waxyaabaha la yaqaan ee kala ah: Fedora, Ubuntu, OpenSuse, Chakra, iyo kuwa kale.Hadda, markii aan dhowr maalmood la qaatay dhowr ka mid ah, waxaan ku siin karaa ra'yigeyga, si ka yar ama ka yar maad ahaan, qaarkood.
Intaas waxaa sii dheer, waxaan si buuxda ugu raacsanahay waxa aad leedahay. Mid ka mid ah kuwa i siiyay qaladaadka ugu badan 'noloshayda' waa Fedora. Iyo sidoo kale, maaha in la xuso mararka qaarkood, markaad cusbooneysiineyso nidaamka, wax walba way jabaan, oo dib uma bilowdo.
Aad u wanaagsan tan ..
Waxaan kaga hadlaynay mowduucan boggan 😀
Mid ka mid ah oo ka bilaabanaya Linux wuxuu galaa cudurkan isaga qabsanaya midkiisa. Kadib isticmaalka, barashada iyo rakibida dhowr disho, wixii aan ka arko, had iyo jeer waxaad tagtaa Arch. Cilladda 'Mar alla markii la rakibo Arch, weligaa kama tagi doontid' waa run, habka aan ku helay mid la mid ah, oo la kala qaado Slackwaritis.
Nooloow cudurka 'Arch syndrome'
Ma aanan aqrin qodobadan. Waxaan ka baqayaa inay naga saamayn badan tahay sidii aan filayey.
Halkaan waxaa jooga mid kale. Marwalba waxaan ku noqdaa dib ugu noqoshada Debian, in kasta oo aan runtii isha ku hayo Arch. Laba todobaad ka hor ayaan rakibey oo ay ka baxday markii ugu horeysay, laakiin waqti yar oo aan ku saxo awgeed ayaan dib ugu noqday. ilaa Deb. Waayadan waxa ugu buuqa badan waa miisaska, midkoodna ima qanciyo, marka laga reebo Gnome 2.30 🙁
Ma aqaano inay nasiib darro tahay laakiin sidoo kale waxaan la ildaran yahay cudurkan in kastoo aan waqti dheeraad ah siiyayo diroga sida caadiga ah 1 ama 2 bilood, in kasta oo kan ugu soo raagay ugu yaraa uu ahaa fedora, way fiicantahay inay jiraan cilado xirmooyinka dibedda laakiin waa in Fedora uu ka booday khaladaad xitaa xirmooyinka ku yimid iso, xitaa furitaanka kalkuleytarku, waa wax aan la aqbali karin oo muddo toddobaad ah ku qaatay darawalkeyga adag, laakiin ka waran haddii tan ay i caawisay ay tahay inaan helo jahwareer cajaa'ib leh sida mageia ama sabayon in laga yaabo in maalin uun mid ka mid ahi uu ku sii nagaado darawalkayga si aan caadi ahayn, si fiican u garan maayo inay cudur badani yihiin.
Hal su'aal: mid ka mid ah cawaaqib xumada ka dhalan karta 'distro hopper' waa qaabeynta joogtada ah ee qeybaha, tani miyey saameyn ku leedahay caafimaadka darawalkayga adag?
Ku jawaab HerJo
Qalab kasta oo qalab ah wuxuu leeyahay nolol waxtar leh ... Ma garanayo, laakiin waxaan qiyaasayaa in nadiifinta (qaabeynta) iyo in wax badan loo qoro HDD ay gaabinayso noloshiisa waxtarka yar, kuwani waa uun malahayga 🙂
Waa milicsi aad u wanaagsan. Inbadan oo naga mid ah waxay dareemi karaan aqoonsi khibradaada qodobo kala duwan. Runtu waxay tahay safarkan la’aanteed ma joogi lahayn meesha aan joogno, mana ogaan karno waxaan naqaan. Runtuna waxay tahay, in kasta oo waxyaabo badan oo kala duwan, waqtigan oo dhan waxaan isticmaaleynay Linux.
Runtu waxay tahay safarkan la’aanteed ma joogi lahayn meesha aan joogno, mana ogaan karno waxaan naqaan. Runtuna waxay tahay, in kasta oo waxyaabo badan oo kala duwan, waqtigan oo dhan waxaan isticmaaleynay Linux.
Waa maxay weedh qurux badan.
Waxaan horeyba uhelay disto kufiican pc-ga iyo Manjaro Xfce !!!
Qoraal aad u fiican, in kasta oo aan ku qanacsanahay inaan ka boodo inta u dhexeysa qaybinta. Midka koowaad ee aan isku dayay wuxuu ahaa Ubuntu inkasta oo aan dhowr jeer isku dayay kuwa kale sida Mandriva, Opensuse, Kubuntu iyo Arch, aakhirkii waxaa iigu hadhay Ubuntu laptop-kayga iyo Arch netbook-kayga. Waan jeclahay Arch, laakiin waxaan kaliya ku hayaa netbook-kayga, maxaa yeelay anigu uma isticmaalo intaas in ka badan oo Arch wuxuu u baahan yahay inuu gacmihiisa ku helo. Tan iyo markii aan u isticmaalo laptop-kayga shaqada, waxaan haystaa Ubuntu (oo aan aad u jeclahay) maxaa yeelay daqiiqado gudahood dib ayaan dib u cusbooneysiin karaa ama cusbooneysiin karaa wax walbana hal mar ayey shaqeeyaan.
Dhinaca kale, waxaan qirayaa in waxa aan waxbadan ka badalay uu yahay maamulaha desktop-ka, aniga oo maraya gnome 2.x, gnome 3.x, KDE, XFCE, Cinnamon, Unity, iyo kuwo kale, xitaa waxaan sugayaa dugsiga hoose inaad u soo baxdo hada xasiloon iskuday maareeyahaaga Gala (oo u muuqda mid qurux badan oo aad u shaqeynaya xayeysiintaadii ugu dambeysay http://elementaryos.org/journal/meet-gala-window-manager
Ku jawaab Luis Gonzalez
Gala waxay u egtahay mid heer sare ah, wax fikrad ah kama aanan qabin jiritaankeeda. Haddii maalin uun aan ka dheregto fiiqista ama xfwm, si toos ah ayey ii bedeshay.
caano 28 dijo
hahaha waxaan dhamaanteen u marnaa taas si aan u dareemo raaxo haddii aad xun tahay waxaad ogaatay in distro aysan ku buuxin doonin, koofiyad cas ayaa igu dhacday, ka dibna suse furan, baaritaanka ubuntu, waan jeclaa inay iigu fiicneyd aniga laakiin waxaan ogaaday wax wuu cuslaaday waxaan ku rakibay waxyaabo badan, waxa macquulka ah in la sameeyo ayaa ah inaan aado Debian waxaan ka helay wax kasta oo aan doonayay xasiloonida iyo dhamaan waxyaabihii wanwanaagsanaa ee Ubuntu soo bandhigtay laakiin pegon kale ayaa doonayay xirmooyin badan oo hadda socda oo baaraya arch mana jirto dib u noqosho, ee hore disto Waxaan la joogaa Debian si aan u helo xasilooni iyo xasillooni waa boqorka, hal abuurnimada ubuntu iyo desktop ku dhowaad kaamil ah, sidoo kale suse u furan sidoo kale desktop kale waligeyna ma jecli xirmooyinka rpm, Arch indhahaaga ayuu sii furaa waana jeclahay falsafadiisa isku dayaysa inay ilaaliso Hadda waxaan haystaa 4 sano jir.
Ku jawaab caano 28
Hmm, waxaan maareeyaa qaar ka mid ah server-yada 'Lenny' iyo 'Tuujinta' in marwalba oo aad u baahan tahay inaad garaacdo CPU -ga ama si fiican dib ugu bilowdid- maxaa yeelay way burburayaan, iyadoo Arch marna aniga igu dhicin.
Anigu ma ihi mid aad u jahwareersan. Daawooyinka aan hayaa waxay iigu dambaysay ugu yaraan 4 bilood. Dhanka kale, waxaan ku tijaabinayaa isos-ka VirtualBox. Si kastaba ha noqotee, waxaan u sameeyaa danta kaliya ee ah inaan iyaga xakameeyo.
Anigu ma ihi nin si qiiro leh u shaqeeya. Daawooyinka aan hayaa ugu yaraan 4 bilood. » ????
Haha, taasi waa si sax ah distro hopper
ugu yaraan 4 bilood, ama ugu yaraan 4 bilood. boostada ayaa ka hadlaysa isbeddelada soo noqnoqda
Oo! Waxaan si kama 'ah u noqday mid: S
Safarkayga shaqsiyeed ee dunida LINUX waxaan isku dayay ficil ahaan waxkastoo, debian iyo derivies sida Suse, Mandriva iyo RedHat iyo waxyaabo kale (oo ku saabsan xirmooyinka RPM) runtiina ma garanayo sababta aan ugu laabanayo Arch Linux. Meelaha loo yaqaan 'Desktops' (DE) iyo Maareeyayaasha Daaqadda (WM) waxaan isku dayay wax walbana sidoo kale marwalba waxaan ku noqdaa GNOME (laptop-kayga) iyo LXDE dusha sare. Waa run inay tahay inaad waqti yar kubixiso si aad uhesho xasilloonida laakiin ma aha wax aad ku qorto guriga. Ubuntu iyo Suse (desktop) iyo Red Hat (Servers) waxay igu bilaabeen LINUX iyo runta ka dib ficil ahaan 10 sano ka dib weligey kama qoomameynin inaan ka soo haajiray Windows ilaa LINUX.
Milicsiga oo aad u xiiso badan;). Si daacadnimo ah ayaan waliba u soo maray isla markaana xiisadaas naxdinta leh ay qaadatay waqti aad u wanaagsan XD. Laakiin aakhirkii way iga xanaajisay isku daygii iyo dhaqaaqa badan. Waxa aan u maleynayo inay wax badan i caawiyeen, ka sokow ogaanshaheyga, waa inaan sameeyo sharraxaad ballaadhan, taas oo ah, kuma dhaleeceynayo dhaleeceynta qaybinta qaarkood inkasta oo ay jiraan xaqiiqooyin jira oo aanan jeclayn gabi ahaanba ama aanan igu habboonayn . Shakhsiyan, uma maleynayo inay tahay waqti lumis, laakiin taa bedelkeeda waa hab wax lagu barto oo lagu ogaado, waxaa laga yaabaa inaysan noqonin kuwa ugu caabudsan, laakiin had iyo jeer waxay kaa tagaysaa wax wanaagsan.
Teeda kale, maxay ugu xunyihiin Fedora, maxaa liitay iyaga ku sameeyay? haddii ay tahay jacayl, shaki la'aan mid ka mid ah kuwa aan ugu jeclahay;).
Waad saxantahay Haddii aanan la kulmin Arch, weli wuxuu noqon lahaa Fedorian laf-cas (ama buluug, arrintaas)
Markii aan la ogeyn mustaqbalka Kubuntu, waxaan bilaabay inaan raadsado waxyaabo kale oo kii ugu horreeyay ee aan isku dayayna wuu sii joogay (Mashruuca Chakra) mana aanan sii wadin raadinta isbarbardhiga. Aniga igama ahan inaan badalo si isdaba-joog ah oo kayar markaan wax waliba si fiican u shaqeeyaan, si isku mid ah aaladaha kale waxaan u isticmaalaa oo kaliya Debian.
Guud ahaan, distrohoppeás-gaar ahaan bilowga- ilaa hal maalin UPS !! Waxaad ogaatay in noocaas 'disro' ay tahay mid gebi ahaanba laga cabsado oo inkasta oo aad dib ugu soo noqon karto in muddo ah, haddii mashiinka aad u isticmaasho runti uu kaa dhaadhiciyo markaad isbarbar dhig ku sameysid dhibic iyo kan kale, daqiiqadani waxay imaaneysaa meesha aad ku ogaatay in _that_ uu yahay distoorkaaga.
Waxaan jecelahay in aan ka fikiro hadii aanan isticmaalin Arch in aan isticmaali lahaa Gentoo ama Slack, laakiin runtu waxay tahay in isku soo wada aruurinta wax walboo isdaba joog ah madaxayga ayey gubi laheyd oo isticmaalka Slack waxay noqoneysaa in laga qodo mootada Ninja oo ah Arch for a Ford T inuu socdo agagaarka magaalada Axadaha (intaadan seexan!).
Waa run, laakiin aakhirka had iyo jeer waxay ku timaaddaa gabagabada in aysan jirin sababo aan loo sii joogin Arch.Waa in Arch uu yahay waxa qof walba doonayo GNU / Linux inay ahaato.
Waxaan u maleynayaa inay tani tahay cudur faafa :). Waxaan u bilaabay sidii ugu badnayd Ubuntu, ka dib waxaan isku dayay Xubuntu iyo Kubuntu xoogaa, ka dib, daruuriga (Waxaan la joogay 62 mhz k500) Waxaan isticmaalay DSL qaaliga ah, waxaan ka helay dhadhan minis ah (maahan gogosha, in kastoo sidoo kale ), baaritaan Puppy, Tinycore, Slitaz iyo qaar kaloo badan; Mashiin cusub ayaan dib ugu laabtay Ubuntu (gaar ahaan maxaa yeelay waxaan la wadaagaa mashiinka walaalkay waligiisna wuu igu neceb yahay boodbood kasta) waxaanan abuuray qayb kale oo aan ku rakibay tijaabinta debian, tan dambena waxay socotay laba sano illaa toddobaad ka hor ayaan rakibay. Chakra (tan iyo intii aan qorayo). Marnaba ma rakibi karin Opensuse (fiidiyoow), Fedora sidoo kale fursad ayey heshay. Waxaan doortay inaan sameeyo qayb gaar ah oo aan ku tijaabiyo distros, inkasta oo imika aanan intaa badnayn, inyar baan ahay, laakiin aniga waxay ii tahay farxad inaan isku dayo qaybinta cusub ama WM, waa ku xigeen aan ku kaco biir qabow iyo sigaar. Waan ka xumahay billetka iyo salaan dhammaan jonkis distro.
Maqaal aad u wanaagsan. Waqtigaan la joogo, uma maleynayo in 'cudurka' uu i qabtay, waxaana laga yaabaa inaan si dhakhso leh ugu dhex maro ArchLinux: Mint -> Ubuntu -> ArchLinux -> Fedora. Waan ku raacsanahay inta kale in Fedora ay tahay qayb yar oo caajis ah oo ku saabsan horumarinteeda, waxayna soo tuuraysaa cayayaanka qalaad kadib cusbooneysiin kasta. Ubuntu iyo Mint waa qaybsi aad u raaxo badan oo loo adeegsado, laakiin markii la istcimaalo in muddo ah - tanina waa aragtideyda - hal nooc oo ka mid ah goobaha lagu iibiyo barashadiisa GNU / Linux.
Daawada saxda ah, hubaal, waa in la dhiso "Linux ka xoq", laakiin waa inaad aqoon ku filan u leedahay sidaas (iyo geesinimo) inaad ku sameyso.
ElementaryOS waa midka aan sugayay muddo dheer (Sida iska cad 'Dayaxa'). Waxaan isku dayay dhawaan waxaanan u arkay wax weyn. Waxaan u maleynayaa inaan ku dhegi doono midkaas, laakiin nasiib daro sidoo kale waxaan ahay distoor-yahan mana hubo inaan fulinayo wixii aan horay u sheegay xD ..
Salaan kadib .. Qoraal wanaagsan
Maqaal aad u wanaagsan, waa iska daayaa iyada oo aan dhihi waxaan dareemayaa gabi ahaanba identified
Iyo, isku dhaca ama maahan, Arch wuxuu umuuqdaa meeshii ugu dambeysay ee dad badan ...
Waxaan ku bilaabay adduunkan sidii adeegsi joogto ah oo runti aamin ah Mandriva. Dhibaatooyinkii aan ku qabay Wi-Fi-ka laptop-kayga oo aan ka soo qaatay sanadkii 2010-kii ee Mandriva ayaa igu qasbay inaan tijaabiyo xulashooyinka kale anigoo raadinaya xalka aanan ka heli karin Mandriva. Sidan ayaan ku noqday "semi-distro hopper", oo aan u guurayo Ubuntu, ka dib Linux Mint, ka dibna si kooban u taga Arch, ka dib OpenSuse, ka dib Sabayon, si aan ugu laabto Mandriva qaybteeda 2011, oo aan ku sugnaa 3 bilo kahor intaadan kusoo noqon si joogto ah ujoogo OpenSuse.
Laga soo bilaabo bartamihii-2010, sidoo kale waxaan ku mashquulay desktop-kayga, gaar ahaan markii aan khibrad aad u wanaagsan la yeeshay GNOME 2 (Waligeyba waxaan ahaa qof ku qanacsan isticmaalaha KDE), marka waxaan marmarsiinyo uga dhigtay rakibidda OpenSuse (GNOME) ) ka dibna Linux Mint Debian Edition. Waan jeclaa GNOME 2, in kasta oo aan isku dayay ku dhowaad nooc kasta oo deegaan ah (waxaa la igu dayay inaan rakibo XFCE dhowr jeer), isbeddelka GNOME wuxuu iga dhigay inaan mar uun magan galo KDE mar kale, sidaa darteed Linux Mint Debian Edition ayaa uga tagtay miiskeyga. bedelkeed Sabayon, ka dib PCLinuxOS, ka dibna Chakra ka hor intaadan ku laaban OpenSuse.
Waxaas oo dhan iyada oo aan la tirinin tirada disros ee aan isku dayay VirtualBox, tan iyo markii aan jecelahay in aan jaleeco distros-ka soo jiidanaya dareenkeyga iyo deegaankooda.
Hadda waxay umuuqataa in xasilloonida weyn iyo khibrada weyn ee OpenSuse iyo KDE ay u dhaqmayaan sidii "dawada wax ku oolka ah" ee ka dhanka ah xD
Waad salaaman tahay maqaal wanaagsan, waxay igu dhacday bilowgii markii aan ka bilaabay GNU / Linux ee laptop-ka waxaan haystaa debian-cut iyo w7 oo aanan isticmaalin tan iyo xilligan oo aan awood u yeeshay inaan ku habeeyo wax kasta oo aan u baahdo, on the PC Waxaan haystaa Archbang (in yar oo aan Arch u haystay) Sabayon (waxaan u rakibey si aan u tijaabiyo, waxaan ugu mahad celinayaa maqaalka maqaalka Perseus oo uu ku sii nagaaday) iyo Wxp (Diablo 3 iyo daabacaadda waxqabadka badan).
Waan jeclahay Arch sida ugu badan ee falsafadiisa sida weyn ee Pacman iyo yaourt, laakiin waxaa laga yaabaa in haddii khalad ka mid ah cusbooneysiinta kooxdeyda ay jabiso nolosheyda toddobaadlaha ah tan iyo markii aanan guriga joogin, waxaa laga yaabaa inaan ka fekero inaan Debian u noqdo distoorka ugu weyn, ma ihi Ma ogi Arch-Sabayon allabari lahaa.
Hagaag dib ugama duuduubo
Maqaal xiiso leh, oo aan inta badan ku aqoonsado. Ka dib markii aan soo galay Linux 2008, aniga iyo Ubuntu, waxaan ka cararay imaatinka Midnimada 2010. Waxaan u wareegay KDE, LinuxMint, dhowr bilood ka dib waxaan aaday Chakra. Laakiin bartamihii-2011 waxaan doonayay inaan tijaabiyo Arch, tan iyo markaasna waxba ugama badalin. Aniga ayaa la igu rakibay muddo ku dhow sanad mana haysto wax qorshe ah oo aan ku beddelayo mustaqbalka. Waxay ii ogolaaneysaa inaan tijaabiyo deegaanno kala duwan iyo baakado sida aan doono, taas oo horeyba iigu qancisay xiisaha aan dhammaadka lahayn, haha.
Maqaal xiiso leh. Kiiskeyga, waxwalba waan isku dayay taasna waa ay ii adeegtay si aan u ogaado in ugu dambeyn, doorbidka aan doorbido uu yahay oo had iyo jeer noqon doono Debian.
Mararka qaar waxaan rabaa inaan ka tago arinka "Versionitis" iyo sida ay wakhtiyadiisu u duugoobaan ay noqon karaan, laakiin kaalay, raaxada aan ku dareemo qaybintaan markasta waxay igu qasbaysaa inaan la joogo.
Faahfaahin kale ayaa ah in la shaqeynta Debian ay aniga aad uga fudud tahay qaybinta kale. Sikastaba <3 Debian
Isla waxbaa igu dhaca aniga laakiin Fedora. Intii aan isku dayo oo aan isku dayo, anigoo fiiro gaar ah u leh hagaajinta lagu xayeysiiyey tan ama tan distooriga ah, marwalba waxaan dib ugu noqdaa koofiyaddii buluugga ahayd (in kasta oo kan aan sawirka ku haysto uu yahay bunni… hehe.
Ma suurtagalbaa in lagu been abuurto-daawo lagu khafiifiyo? soo iibso disk ka, aan dhahno, 2 terabytes ugu yaraan, oo rakib dhammaan qalabka waaweyn. Miyaad qiyaasi kartaa, dayactiri kartaa oo cusbooneysiin kartaa sida 15 ama 20 loo qaybiyey markiiba? haha, waalli aad u xun.
Waxaan tijaabiyaa distros ka Virtualbox iyo ulo USB laakiin kama tagi doono xirmooyinka DEB iyo desktop KDE (xannibaadda masiibo). Ma haysto waqti aan ku rakibo-ku-duwo-ku-rakibidda-ku-rakibidda-ka-saarista… Si aan waqtigayga u lumiyo waxaan horay u haystay Windows iyo dhammaan barnaamijyadiisa freeware ama shareware.
Ku darsaday Distro Hopping Anonymous:
Waayo-aragnimadaydu way dheer tahay, ilaa Debian Sarge (2005), qaybinta ugu horreysay ee gebi ahaanba bedeshay daaqadaha.
Waa inaan idhaahdaa 'Distro Hopping' waa cudur raaga, sidaa darteed daawo ma leh. Jadwal ahaan adiga ayey ku weerari doontaa, saaxiibna, xakamaynta ma fududa: Waxaan u imid inaan ku rakibo barnaamijka 'Gentoo' noocyo kala duwan oo samee ah dhowr jeer toddobaadki. Si ugu dambayntii loogu soo noqdo deganaanshaha Debian.
Waxaan xakameynayay muddo dheer, sidee: Maya rogidWaa bilowgii wax walba, marka hore nooca loo yaqaan 'versionitis' ee aan ku jirin meelaha lagu kaydiyo (waan soo ururin doonaa), markaa fartaad qaniini doontaa: KDE-4 mar horaba way baxday.? Goorma?! Goorma?! Goorma?! , aakhirkiina waad dhacday !!!
Daaweyntu ma jirto (kiiskeyga, dabcan), laakiin xakamaynta ayaa jirta, sidee? qaybinta xasilloonida ah ee ay kugu qasbeyso inaad u qaabeysid si aad ula qabsatid waxaad jeceshahay: Debian - Slackware.
PS: Mar dambe ma cuno ciddiyaha!
Hagaag, waan isku dayay dhammaantood, waxaan la joogay Arch laakiin waxaan isku dayay 3-4 disho bishiiba. Si kadis ah waxaan go aansaday inaan isku dayo Kubuntu lts waxayna u shaqaysaa isla sidii Arch, waxa kaliya ee softiweerku aanu u cusbooneysiinin tan midkan laakiin haddii kale waa qumman yahay waxaanan u maleynayaa in 5 sano aan sii joogi doono mar.
Ku jawaab rla
Waxaan la qabsanayaa joogitaanka XD distro
Waxay u muuqataa in xaalado badan versionitis lagu daaweeyo Archlinux. Kiiskeygu waa midka caadiga ah ee laga bilaabo Ubuntu ka dibna wax walba oo yar la isku dayo, Fedora, Mandriva, Opensuse, Trisquel ... ka dib Debian iyo ugu dambeyn Arch. Marka rakibidda iyo qaabeynta la barto, waxay noqoneysaa tan ugu fudud ee la qaadi karo. Waxay u egtahay in dhammaantood hal la wada haysto maadaama aad ka dhigi karto wax alla wixii aad rabto. Mararka qaarkood waxaan ku rakibaa ubuntu saaxiibkey waxayna umuuqataa mid aad uga dhib badan qaansada.
Laakiin mar haddii ay ku dhammaato nooca loo yaqaan 'distros of distros with Arch', waxay bilaabaan nooc kale oo ah nooca 'version' sida deegaanka desktop-ka. Amarka waxaad ku beddeli kartaa desktop-ka dhib la'aan (illaa hadda). Oo markaa waxaan u digtoon nahay noocyada ugu dambeeya ee kde, gnome, xfce ... ama ciil ku wajahan yaraanta furitaanka sanduuqa furan ama sanduuqa 'fluxbox' laakiin taasi meertada ka dib dhibaatooyinka qaarkood ama raaxo la'aanta waxay kaa dhigeysaa inaad ku laabato raaxada iyo xasilloonida kde.
Tan iyo markii aan isticmaalo chakra, waxaan isku dayay inaan isticmaalo qashin kale laakiin waxay kusocdaan 3 maalmood qeybta baaritaanka, majiro wax walwal ah oo iga farxiya sida chakra.
Waxaan u imid dunida Linux iyada oo loo marayo Red Hat iyo Suse. muddo kadib adigoon isticmaalin Linux, waxaan helay Ubuntu 8.10. oo waxaan u isticmaali jiray si joogto ah illaa nooca 10.10 (aniga ahaan, nooca ugu fiican ee Ubuntu illaa hadda). Waxaan go aansaday inaan ka tago distoorkaan oo waxaan bilaabay safarkayga: Debian, OpenSuse, Mandriva, Fedora, PCLOS (muddo dheer ayaan la joogay tan). Waan ka caajisay isku mid, sanad ka hor ayaa waxaa la igula taliyay Chakra, distro igu hogaamisay inaan "ku jeclaado" KDE (xitaa haddii ay tahay mid xoor leh), oo aad ayaan ugu faraxsanahay hadda, xasilloonideeda, bulshadeeda weyn, xawaaraha iyo farshaxan.
xD Waxaan u maleynayaa inaan qaatay kabasho gaaban laakiin ku soo noqnoqda xD
Waxaan bilaabay inaan xiiseeyo softiweer bilaash ah markaan ogaaday inay i siinayaan buug xusuus qor ah iyo raadinta barnaamijyada aan isticmaali lahaa waxaan bilaabay inaan GPL ku aqriyo hal xD
-Waxaan helay buugayga xusuusta leh win7, waxaan u adeegsaday dhowr bilood isla markaana fasalka horeba wuxuu bilaabay inuu ku guuldareysto xD
-Waxaan isku dayay inaan u dhaqaaqo ubuntu, laakiin cilado aad u tiro badan oo ka yimid 11.04 ayaa i dilayay xD
-Waxaan u guuray Fedora, laakiin waxay ila noqotay sidii inaan Shiine ku ahaa Ruushka, khaladaad la yaab leh oo aan la fahmi karin, foomamka qaabeynta qalaad, cilladaha ku jira cusbooneysiin kasta, amarro aan macquul ahayn in la xafido, fedora 15, oo ah cadowgeyga ugu xun xD
-Waxaan dib ugu soo laabtay si aan u guuleysto 7… waxay qaadatay 3 bilood, laakiin waan ka faa'iideystay iyaga si aan wax uga barto wax walba oo ku saabsan nidaamka GNU / Linux
-Waxaan ku guuleystey in aan helo ubuntu oo si fiican u shaqeyneysa 11.10
-waxaa lagu dhajiyay ubuntu waxaan isku dayay inaan isticmaalo Linux Mint, waan jeclaaday, laakiin waxaan dhibaatooyin badan kala kulmay xirmooyinka luqadda, waqtigaasna ma fahmin Ingiriisiga xD badan.
-Waxaan isku dayay inaan rakibo Debian, laakiin macquul maahan, gabi ahaanba marwalba waxbaa ku fashilmay rakibida, wax kastoo aan sameeyo, mararka qaar xirmooyin badan lama raacin, mararka qaar jawiga garaafka lama rakibo, wax waligoodba waa fashilmaan
-Waxaan dib ugu noqday Ubuntu wali 11.10
-Ficil geesinimo leh waxaan go aansaday in aan khatar galiyo rakibida Arch, waxaan aqriyay mudo todobaad ah dhamaan hagitaanada rasmiga ah iyo kuwa aan rasmiga aheyn iyo tilmaamaha qaabeynta, waxaan heystay 7 rakibo oo aan kufashilmay markii aan aakhirkiina ku guuleystey inaan si sax ah u rakibo nidaamka, waxaan kabaxey xididka aad u yar, sidaa darteed waxaan doonayay inaan ku ballaariyo gparted, qaladkii ugu xumaa noloshayda xD
Dib-u-soo-kabasho guuleysi ah ka dib (markii horeba inbadan oo canchero ah: P) ugu dambayntii waan nastay xD
Haatan waxaan haystaa Arch-Linux-kayga quruxda badan ee ku qoran buugga, iyo Ubuntu 12.04 oo ay weheliso Win7 Ultimate dualboot, kombuyuutarka kumbuyuutarka
Safarkaygii ... wuu dhammaaday
Haye, waxaan ka bilaabay Ubuntu sanadkii 2008 waxaan u maleynayaa, markii aan iibsaday buug yar oo WVista ah oo gurguuranaya, oo gurguurta maxaa yeelay wali wey taalaa laakiin kaliya kiisaska gaarka ah iyo qayb ahaan in wax la badbaadiyo. (Waan ka tagayaa maxaa yeelay ma dareemayo inaan rakibayo w7). Markii Midnimadu ka soo muuqatay Ubuntu muddo ayaan adeegsan jiray, laakiin markaa waan daalay oo verionitis ayaa i weerartay. Kahor intaanan isku dayay inbadan Virtualbox iyo dhowr distro light oo aan ku rakibey kumbuyuutar hore (DML, Puppy, Xubuntu, Lubuntu). Waxaan dhawaan geliyay LMDE qoraalkayga, illaa iyo dhowr toddobaad ka hor waan ka daalay cusboonaysiin la'aanta oo waxaan aaday dhinaca Kde (horay ayaan isku dayay mana xirmin), marka waqtigan ugu dambeeya ee aan rakibo Opensuse, waa Waan ka saaray sababo la xiriira dhibaatooyinka wifi (aad u gaabis ah), ka dibna Mageia (cod la'aan), PclinuxOs (isku mid, cod la'aan), SolusOs (desktop kumuu qancin, hada waxaan rabaa Kde!) Markaa waxaan ku dhameeyay Kubuntu. Wax walba aniga ayey igu habboon yihiin, markaa hadda weli waan joogaa.
Sidoo kale hoos Chakra sidaa darteed waa inaan isku dayaa.
Arch waxaan ku bilaabay hal mar qaab qaab ah, laakiin ma aanan dhammayn karin, aqoontaydu xoogaa waa aasaasi.
Pd: Tan, aan ku darno in isla wax igu dhaca taleefankayga gacanta iyo Android!
Wax la mid ah ayaa igu dhacay, laakiin tani waxay la timid imaatinka Ubuntu ee Unity, wax walba way ku fiicnaayeen Ubuntu laakiin waxaan isku dayay Unity noocyadeeda kala duwan (oo leh 11.04,11.10, 12.04 iyo 12.04) mana aanan xamili karin, tusaale ahaan, iyadoo XNUMX Midnimo Waa mid aad u culus waxaanan bilaabay inaan isku dayo dhawr diro aakhirkiina waxaan la joogay Kubuntu 🙂!
Waa wax la yaab leh sida wanaagsan ee KDE ay uga socoto kumbuyuutarkayga, aad u dhakhso badan, waxba laguma qasbin, taas oo midnimada 12.04 aysan dhicin.
Waxaan u maleynayaa inaan ka sii boodayo disto ilaa distro.
Waxaan ku bilaabay Ubuntu 10.10, waxaan aaday 11.04, kadib 11.10. Halkaas waxaan uga tagay Xubuntu, ka dibna Debian Xfce. Liiska waa dheer yahay, runtii aan aad ujeclahay waxaa kamid ah Debian, Slitaz, Fedora iyo Arch.
Waxaan sidoo kale sameeyay mid ka mid ah dd oo ka mid ah qeybta Slitaz, oo waxaan ugu keydiyey iso. Marka waan helayaa hadaan u baahdo.
taariikh duug ah oo run ah!, way nagu dhacdaa kuligeen, in kasta oo ay waliba tahay in mid la xiiseynayo, mahadsanid maqaalka waa mid aad u wanaagsan
Waxaan sidoo kale la kulmay waqti Distro Hopping!
Xiriirkeygii ugu horreeyay ee aan la yeesho Linux wuxuu ahaa sanado kahor RedHat, halkaasna waxaan ka noqday mid aad u xiisa badan waxaan helay qalab dhan oo nidaamyo ah: openSuse, Linux aasaasiga ah, ka dibna mandriva, ubuntu, debian, arch, puppy Linux, chakra, trisquel came ...
Waana iyada oo aan la dhihin marka laga reebo qulqulka qulqulka, dhibaatada kale waa boodboodka desktop-ka, tijaabinta kun deegaan desktop iyo midba midka kale u socdo adigoon istaagin illaa aad waalato. Waqti aad u badan ayaa lagu lumiyaa tan ugu dambayntiina waxa na soo gaadhaa waa wax aad u yar, waxay inaga dhigaysaa ku dhowaad "wax-soo-saar la'aan." Baadhitaanku waa caadi, laakiin sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad u tagto wax aad ku kalsoon tahay.
Shakhsiyan, waxaan aakhirkii la gaadhay axdi is-xilqaan naftayda. Anigana waxaan isku qasbay inaan qaanso ahaan u ilaaliyo laptop-kayga iyo kumbuyuutarkeyga iyo debian ahaanna u noqdo adeege kumbuyuutarka yar ee aan ku leeyahay boggeyga. Waxaan u adeegsadaa Debian iyada oo aan lahayn jawi garaaf ah, iyo Arch waxaan ku isticmaalaa KDE desktop-ka iyo gnome shell iyo cabsi WM ah laptop-ka, taas oo ah kumbiyuutarka aan ugu isticmaalo kulleejada.
Ummm, way i xanuunaysaa inaan wali dhibaatadan haysto, waxkastoo yar ayaan isku dayay .. Laga soo bilaabo Ubuntu 8.04, ilaa nooca hadda, iyada oo loo marayo LMint, LMDE, Fedora, Puppy, PCLOS, Lubuntu, Sabayon, Arch, Debian, Archbang and a iyada oo aan la helin tiro aad u tiro badan oo ay noqon lahayd liis dheer oo ku filan in halkan lagu faahfaahiyo.
Waxa aan raadinayo ayaa ah qaybinta xasilloonida ka sarraysa oo dhan, oo leh tiro aad u tiro badan oo baakado waaweyn ah, oo la cusbooneysiiyey isla markaana xoogga la saarayo isticmaalka Barnaamijyada tan iyo markii, waxaan bilaabayaa tababbarkayga sidii horumariye waxaanan raadinayaa qaybinta noocan ah. , Waxaan dareemay raaxo leh Sabayon tan iyo markii aan maalmo kooban ku dhex jiray laakiin gelitaanka yar ee ay leedahay 'Gentoo' iyo dokumenti la mid ah oo ku saabsan darteed, ayay igu adkaatay inaan ku guuleysto waxyaabo ku saabsan qaybinta la sheegay, hadda hamigeyga waxaan u maleynayaa in Archlinux wuu buuxiyaa laakiin shaqada waxaan ka dhigayaa curve barashadeeda mid cidhiidhi ah.
Waxaan ku hoos jiray Archbang labo maalmood hada waana ku daalay! 🙁.
Waxaan u maleynayaa in helitaanka waxyaabo kale oo badan aan marwalba yeelan doono cilladan hehe xD!
Rikoodh ahaan, waan aqriyay dhammaan faallooyinkaaga, laakiin waligay igama qasbin inaan ka jawaabo intaas oo badan.
Laakiin in Gentoo oo aan haysan dukumiinti wanaagsan waa quraafaad. Waxay ku leeyihiin wiki la yaab leh halkaas.
Dhab ahaan, wiki-ga 'Gentoo Wiki' iyo 'Arch Wiki' waa runtii weyn yihiin 😀
Aniguba waan lasocday xaaladan sidoo kale, laakiin waxaan u maleynayaa in Open Suse uu ilaalinayo inuu iga caawiyo dhaqan celinta 🙂
Hambalyo anti!, Waxaan rajaynayaa inaad dhakhso u bogsato ... Intaas ka sokow, ma ogi haddii aan ku dhibtooday foosto, waxaan haystaa oo keliya Ubuntu 11.10, Linux Mint 11, Zorin 6, CentOS 6, OpenSuSE 12.1, Tuquito 5 iyo Kubuntu 12.04 hadda, inkasta oo aan ka badnayn 2 maalmood oo aan isticmaali jiray, si dhab ah ugama fiirsado iyaga ... Runtu waxay tahay inaan dareemo faaruqnimo luminta ilaha dhaqaalaha sida waqtiga, iftiinka iyo hurdada 😀 ... Malaha waxaan tijaabin doonaa inbadan awood u leh inuu isticmaalo Arch Linux, oo ah midka aniga i cunay ...
Waxaan soo maray xumaantaas tan iyo markii aan iibsaday laptop-kayga. Waxay leedahay kaarka ATI waana ku dhowaad dhaqan shaydaan oo loo baahan yahay in lagu rakibo D:.
Waxaan rabaa inaan mar labaad isticmaalo arch, laakiin waxay umuuqataa mid dhib badan waana taas sababta aanan ugu dhiiranayn inaan rakibo. Talooyin: C?
Ma doonayo bubulubuntu!
Waxaan sidoo kale leeyahay cillad dismo xanuun, waana ku bogsiiyay anigoo ku rakibaya Gentoo mashiinkii hore laakiin dib ayey u muuqatay markii aan mid cusub dhistay, markalena waxaan marayaa ubuntu, chakra, iyo kuwa kaleba waxaan sii joogay mageia (xitaa aniga xitaa qeyb ayaan ka ahay kantaroolka) tayada kooxda) laakiin wali maheysto qanacsanaantaas kadib markaan rakibo gentoo, taasi waa sababta aan maalin un dib ugulaaban doono (tan iyo markii kombiyuutarkii hore ka dhamaaday diskka ama isha haha) ama yaa garanaya sida loo tijaabiyo qaanso ...
Aad ayaan uga baqayaa inaan tan ku silco ... Ma awoodo inaan adkeysto wax ka badan hal isbuuc anigoon wax ka beddelin '' Dabcan, waxaan haystaa laba qaybood, hal dabaqna waxaan ku haystaa wax ka sii hagaaji. Xilligan la joogo waxaan haystaa Ubuntu 12.10 iyo Mint Cinnamon, haddana waxaan ka fekerayaa inaan isku dayo Kubuntu iyo labadaas midkee la tirtirayaa.
Waxaan rajeynayaa in maalin uun aan helo disto aan ku negaado, maxaa yeelay tani waa walwal!
Muxuu wakiil been u sheegayaa! Waxaan xirtaa Mint kibir hahaha
La hagaajiyay! 😛
Waad salaaman tahay, waan aqriyay maqaalkan xiisaha leh, waana hagaag, sida ay yiraahdaan, madax walba waa adduun, tusaale ahaan, kuma aanan bilaabin Ubuntu, waxaan ku bilaabay cd nool oo loo yaqaan knoppix, boqorka iyo kan ugu wanaagsan ee nool, ka dib tag si toos ah u debian (taas oo runti ah waxa aniga qudhaydu) oo waligayna kama tagin debian, kaliya waxaan isticmaalay nidaamkan. iyo dhamaan aamusnaanta waxaan u arkaa in tilmaanta ugu fiican ee tilmaamtu tahay mid ku habboon oo ku qaybinta xirmooyinka badan ee horay loo soo baakadeeyay ay yihiin debian kuma faraxsana waa qaybinta ugu weyn ee kuwa kale oo badan oo ay ku jiraan ubuntu. Faallooyin dheeri ah hadda debian waa mid saaxiibtinimo ku rakibaya isla markaana uga tagaya inuu ku shaqeynayo laptop-ka maahan hawl adag
"Waxaan u maleynayaa in tilmaanta ugu fiican ay tahay mid ku habboon"
Sideed u dhihi kartaa tan hadaadan waligaa u adeegsan qeybin kale si qoto dheer si aad u ogaato faa'iidooyinka iyo daciifnimada maamulayaasha xirmada?
apt -dpkg, runti- waxay leedahay astaamo xiiso leh, sida iskudubbaridinta xirmooyinka iyo masiibooyin aan la fahmi karin oo aan la isticmaali karin sida HOLD oo qalliin looga saarayo xirmooyinka, waxay kaloo muujineysaa sannadihii ay horey u jirtay, iyadoo aan loo eegayn inta wiish ee ay la kulantay, ama maxaa looga hadlayaa qaabka .deb, oo ku habboon in la cadaabo shaydaanka!
pacman, emerge, yum, zipper iyo conary waa qaar ka mid ah maareeyayaasha xirmada _excellent_ maanta, oo ka sarreeya dpkg dhowr arrimood ...
"Qeybinta xirmooyinka ugu badan ee la soo baakadeeyayna waa debian"
Waa qaraabo. Guud ahaan, inta ugu badan ee xirmooyinka Debian waa codsiyo duug ah - inta udhaxeysa 6 bilood iyo 2 sano, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon server-yada laakiin laga soo gudbiyay desktop.
Sid, dhanka kale, adigoon haysan xirmo casri ah, waa mid aad u deggan oo waa hubaal inaad waqti badan ku bixisid hagaajinta wixii jabiya cusbooneysiin kasta.
Maalmahan arrinta tirada xirmooyinka aad marin ka heli karto muhiimad dambe uma lahan, cidina runti dan kama lihi, sida 'Arch, Gentoo, Fedora, Ubuntu' ama xitaa 'OpenSUSE' waxay leeyihiin xirmooyin 25k ah ama ka badan, halkaas oo aad wax walba ugu haysato 99% isticmaaleyaasha. .
Ma xasilloon tahay? Waxaan u maleynayaa inaanan la wadaagin qodobkaas .. Hagaag, uguyaraan khibradeyda, dhowr jeer oo aan awooday inaan isticmaalo Sid waxay noqotay sida jawharad oo kale ..
Anigu ma aanan isticmaalin Debian ilaa 2 sano (haa Ubuntu, laakiin maahan Debian) waqtigaasna isticmaalka Sid wuxuu ahaa mid taxaddar la'aan ah, nidaamku wuxuu iga dhigay inaan meel walba ku waraabiyo! xD
Hagaag waan ogahay dadka isticmaala Siid maalin kasta oo ku faraxsan sida dixiriga xDDD
Gaar ahaan, waxaan kuu sheegayaa inaan waxbadan ku garto boostadaada, waxaan u adeegsadaa Linux oo ah OS-ka ugu muhiimsan ee halkaas ka socda oo ah nooca Ubuntu 9.04 oo ugu dambeyntii taageeray darawalka Atheros ee Wifi ee Laptop-kayga, marka laga hadlayo, waxaan tijaabinayay koritaanka Linux ilaa Ubuntu nooca 6.06, markii intaas oo dhan ay wali ahayd mid caadi ah oo cusub isla waqtigaas, dhanka kale, marwalba waxaan xiiseynayay inaan isku dayo qeybsi badan oo soo baxa, aan dhaho waxay noqotay kuxigeen, oo loo yaqaan 'Versionitis' , mana dhahayo midna ma barto, maxaa yeelay inkasta oo aan marwalba dib ugu laabto asalkaygii oo aan rakibo Ubuntu, waxaan ka soo raray PCBSD (oo aan wax xiriir ah la lahayn Linux) si aan u rakibo cunsuriyada 2 maalmood sida Arch, waxaan go'aansaday Jarmalku marka lagu daro samaynta gawaarida wanaagsan waxay ka dhigaan mid wanaagsan sida 'OpenSuse', waxaan isku dayay Fedora aad u fiican laakiin waa dhul cadeyn u ah RedHat taasoo ka dhigeysa qori fudud mararka qaar, iyo qeybin kale oo aan dhamaad lahayn, sidaas darteed mararka qaarkood mid ayaa saameeya xorriyadda gariir iyo dhammaan noocyada dhirta ee kor u qaadaya qiyamka anshaxa ee Software-ka Bilaashka ah halkaasna waxaa ka bilaabmaya jahwareerka ah in la ogaado in distro ay buuxiso baahiyahaaga ayna leedahay siyaasad xorriyad wanaagsan Maalmahan aynu dhahno waan bislaaday oo waxaan ku soo gabagabeynayaa sidaada oo kale dhamaadka, waa inaad isticmaashaa qeybinta ee leh xirmooyinka aad u baahan tahay inaad ku shaqeyso xarunteeda, taas ka baxsan taasi waxay iila muuqataa doqonnimo in Linux ay tahay inaan gacanta ku soo dejiyo iyo Ku rakib barnaamijyada ilaha, adoo sameeya waxyaabo iyo alaab. Taasi waa sababta aan ula joogay Ubuntu ama mid ka mid ah waxyaabaha tooska ah ee ka soo jeeda Xubuntu, Lubuntu iyo Kubuntu, noocyadooda LTS siday u kala horreeyaan, oo aan u leeyahay degganaansho la aqbali karo iyo avant-garde anigoon ku dhicin xagjirnimo ama xagjirnimo, marka lagu daro kuwa aan si fiican u amaahdo u taageer labadaba kor u qaadista serverka iyo ku rakibida qaybinta asxaabta raba inay bilaabaan, ereyo kooban ayaan joojiyay dib u soo nooleynta shaagagga. Waxaan kugu martiqaadayaa inaad aqriso qoraal aan qoro oo wax yar kahadlaya waxaan kashifay http://luismauricioac.wordpress.com/2012/03/01/ubuntu-es-una-distribucion-que-no-tan-solo-un-novato-puede-amar/ Salaan!
Weligay ma dareemin in sidaa la ii aqoonsaday ... Waxaan ahaa hawo diimeed tan iyo markii aan la kulmay Linux-kii ugu horreeyay ee aan dib ula noqdo 1998 .... Marwalba waxaan iskudayay inaan sii haysto Ubuntu markaan fahmay in badalaadkeedu uusan aniga waxba iga tarin, laakiin maadaama Ubuntu ay kasoo kaceen khaladaad aan sahlaneyn in la saxo, sida kuwa caanka ah ee "ku bilaw qaab qaab muuqaal ah oo nabdoon" (Xitaa haddii aadan bixin Ha i aaminin, raadi e waxaan isku dayay waxkasta oo ay kugula taliyeen iskuna dayeen qaladkan) waan daalay waxaan ku noqday distoorkii rajada waxaana ku dhacay Elementary Os oo aan degay (waa la yaab in ku tiirsanaanta qadka Ubuntu dhibkaas malaha) ?) Waxa ugu fiican ee tan ku saabsan waa inaan waxbadan baranay oo markaan helno distoor taas leh oo aanan ogeyn waxaas, waanu la joogi doonaa (sifiican ilaa aan dareemeyno inaan isku dayeyno distoorkan cusub ee soo baxay .. iyo in qof waliba amaanto ... lol)
Ku jawaab JoseV
Nancy daniela dijo
Waxaan u maleynayaa in maqaalka uu sifiican u socday, kaliya intaas qeybta ugu dambeysa waxay noqoneysaa mid is burinaya oo aan is qaban karin. Hadday tahay inaad ka fog tahay helitaankeeda laakiin aadan ku degdegin oo aadan mar dambe raadinaynin, sida loo helo haddii aadan eegin tirada badan ee "kalluunka" ku jira "baddaas". Ma jiraan wax qiimo leh oo ku yimaada bilaash ama dadaal la'aan nolosha. Just sida bayoolajiga badda aadan haysan Meyeydaan in dhammaan macluumaadka ku saabsan nolosha badda, wax dhib ah maleh sida ay u baaraan, "cyberbiologists badda" ku filan ma noqon doonto mid. Waxaan rajeynayaa, inay ku qanci doonaan waxay ka baran karaan "noloshan badda" waqtiga ay heli karaan. Dhinaceyga ma raadinayo nidaam qalliin oo qumman, maxaa yeelay ma jiro, laakiin waxaan xiiseynayaa inaan ogaado waxa faa iidada u ah nidaamyada hawlgalka ee soo baxaya ... ha ahaadaan WINDOWS, MAC, LINUX, ANDROID ama wax kasta oo ku soo biira liiska. Taasna waxaa lagu sameeyaa oo keliya baaritaanka iyo tijaabinta.
Ku jawaab Nancy Daniela
Maxaa kugu dhacay, WordPress? Horaad u qabowday